Ireo fandaniam-bola mahavariana ataon’ireo olo-malaza
Efa fantatra fa mampidi-bola ho an’ireo mpanakanto sy olo-malaza any ivelany ny asa ataon’izy ireo. Manara-po ko aizy ireo, amin’izany, amin’ny fanaovana sitra-po sy fandaniana izay eo an-tanana.
1. Ho an’i Johnny Depp izao dia manana sambo izy, ireny antsoina hoe “Yacht” ireny, izay mitentina 18 tapitrisa dolara, manana nosy azy manokana novidiany 3;6 tapitrisa dolara ary mitentina 450.000 dolara ny karaman’ireo olona miasa ao aminy miisa 40.
2. Fanomezana tena lafo vidy no natolotr’i Tom Cruise ho an’i Katie Holmes, taorian’ny mariazin’izy ireo. Fiaramanidina kely mitentina 20 tapitrisa dolara no nomeny azy.
3. Na dia efa miliaridera aza i James Packer, ilay olon-tian’i Mariah Carey teo aloha dia tena tsy zakany ihany ny sitra-pon’ity mpanakanto ity. Rehefa nangatahiny hipetraka any Los Angeles mantsy i Mariah Carey dia nitaky 50 tapitrisa dolara taminy, ankoatra ny fahafahany mipetraka amina “villa” kely iray. Ny vola laniny isam-bolana amin’ny voninkazo nefa mahatratra 100.000 dolara, 45.000 dolara ny laniny amin’ny fikarakarana ireo alikany ary 1 tapitrisa dolara kosa ny fikoloana sy karaman’ireo mpiasa ao amin’ilay sambony.
4. Na dia efa banky rompitra aza i Nicolas Cage dia mbola afaka nividy nosy kely iray mitentina 7 tapitrisa dolara, sambo nahatratra 20 tapitrisa dolara ary karandoana dinaozôro nitentina 270.000 dolara.
5. Ho an’i Beckham mivady, izay efa mandray mihoatra ny 800 tapitrisa dolara isan-taona dia manara-po amin’ny fanatanterahina ny zavatra tiany, izy roa. Manangona izay kanto (sary hosodoko, sary sikotra, tsangan’olona..) misy ifandraisany amin’ny fitiavana mantsy izy ireo. Efa mahatratra 3 tapitrisa dolara mahery amin’izao fotoana ny sandan’ireo zava-kanto voaangon’izy roa ireo.